Tsy manaiky ny birao nasionaly : tsy ho avy amin’ny filankevitra nasionaly ny Seces Antananarivo | NewsMada
Tsy manaiky ny birao nasionaly : tsy ho avy amin’ny filankevitra nasionaly ny Seces Antananarivo
“Tsy namaly ny fanasan’ny birao nasionaly izahay mpikambana ato amin’ny Seces sampana Antananarivo satria tsy misy ny birao nasionaly aminay”, tsy nifidy ny filohan’ny Seces nasionaly sy ny mpikambana rehetra ao anatiny izahay, hoy ny filohan’ny Seces sampana Antananarivo, Ravelonirina Grégoire Sammy, omaly tamin’ny antso an-tariby. Tsy nanatrika ny kongresy nasionaly natao tany Mahajanga, ny volana septambra, ny Seces sampana Antananarivo ka tokony ho nahemotra ny daty. Niziriziry ihany anefa ny birao tamin’izany fotoana izany nanao ny fifidianana ary nametraka ny birao vaovao mitantana, amin’izao fotoana izao. Tsy mankato izany ny Seces sampana Antananarivo ary tsy miara-miasa amin’izy ireo.
Naato tsy ho mpikambana ao amin’ny Seces sampana Antananarivo ny mpampianatra mpikaroka telo, mandrafitra ny biraon’ny Seces nasionaly, satria tsy manaja ny mpikambana namany. Nohamafisiny fa tsy manaraka ny “règlement interieur” izy ireo ary tsy miaro ny tombontsoan’ny mpikambana rehetra.
Novakivakin’ny mpitondra ny firaisankinan’ny Seces ka tonga amin’izao tranga izao. Nanamafy ny filohan’ny Seces sampana Antananarivo fa tsy hanatrika ny filankevitra nasionaly hatao any Toliara izy ireo. Vahaolana narosony ny fanatanterahana kongresy tsy ara-potoana hanaovana fifidianana vaovao hanehoan’ny rehetra ny safidiny. Nanamarika ny tenany fa tsy vonona velively ny hilatsaka hofidina ho filoha nasionalin’ny Seces raha misy ny fifidianana vaovao.
Momba ny fizotry ny fampianarana, ho fitsinjovana ny mpianatra manatanteraka ny fanadinana famaranana, miasa ny mpampianatra sampana Antananarivo. Rehefa vita ny fanadinana, rehefa tsy mivaly ny fitakiana, mihantona koa ny famoahana ny valim-panadinana.